Uzofihlwa maduze obecula kwi-Afro Soul
Khethukuthula Sangweni | July 20, 2021
UZONGCWATSHELWA eMlaza, ngoLwesithathu umculi obeyilungu leqembu i-Afro Soul, uSeargent Malishe oshone ngokuzuma phakathi nesonto ngeledlule.
USabelo Ngema ongomunye wamalungu eqembu, ubhale isitatimende ememezela ukuthi uMalishe uzobekwa endaweni yakhe yokugcina kwaZ eMlaza, ePhase 8.
Kuthiwa inkonzo yomngcwabo kulindeleke ukuthi iqale ekuseni ngo-9. Amazwi enduduzo abelokhu engene njalo ephuma kwabanye abaculi bekhala ngokuhamba kukaMalishe. Inkakha uMbongeni Ngema iveze ukuthi idumele kakhulu ngokuhamba kweciko, yathi ike yasebenza nalo, ilicija. UMalishe ushiye abaningi bemangele ngokuhamba kwakhe ngoba kuthiwa ukhombe izimpawu zokungakwazi ukuphefumula wase equleka, waphuthunyiswa esibhedlela wafika wanqobeka khona.
Amalungu eqembu ekhuluma emsakazweni Ukhozi FM, athe awakwazi ukwemukela ukuhamba kukaMalishe ngoba ubefana nensika yeqembu enza omkhulu umsebenzi. UThandeka Zulu oyilungu leqembu ufikelwe umunyu, wagcina esekhala.
“Imicu eminingi bengiyicula ngiyiphoselana naye esiteji nokwenze saba abantu abaxhumene kakhulu. Okuningi besikwenza ndawonye njengeqembu, uma esefikile bekucaca ukuthi iqembu seliphelele,’’ kubalisa uThandeka.
Bathe abakazi nokuthi bazosivala yini isikhala sakhe eqenjini ngoba kunzima ukuvala isikhala somuntu futhi basazohlala behlele kahle ngokufanele kwenzeke.
USabelo, ukhiphe isitatimende sakhe wacela amalungu omphakathi ukuthi athobele imithetho yeCovid-19, uma sekuwusuku lomngcwabo. Indima yezobuciko igqemeke ingozi kulezi zinsuku ngoba kushone uTsepo Tshola, Pat Shange kanti bekusanda kuhamba uSteve Kekana.